XASAASI: Iiraan oo shaaca ka qaaday In Kaluumeysato looga laayay Somalia & Sababta loo dilay | Baled Weyn Media Center
XASAASI: Iiraan oo shaaca ka qaaday In Kaluumeysato looga laayay Somalia & Sababta loo dilay
Dowladda Iraan ayaa ka hadashay dil dhawaan Ciidamada ilaalada xeebaha Maamulka Puntland ay u geysteen Kalluumeysato Reer Iraan ah oo lagu eedeeyay in ay si sharci darro ah uga kalluumeysanayeen biyaha Soomaaliya.
Ali Asghar Mir-Shekari, oo ah guddoomiye ku xigeenka Amniga Gobolka Balochestan,ayaa sheegay in Kalluumeysata Iraan ee dilka dhaawaca iyo xariga la isugu daray ay ruqsad u heysteen in ay ka kalluumeysan karaan waxaana ay ka heysteen Gobolka Sistan iyo Balochestan ee Dalka Iraan.
Waxaa uu sheegay in Iraan ay ka mid tahay 33-da Dal ee ku jira Ururka IOTC,kuwaas oo fasax u heysta in ay ka kalluumeystaan Galbeedka Hindiya.
Waxaa uu sheegay in 1,200km meel ka fog biyaha Iraan ay rasaas kula kulmeen,islamarkaana ay sababtay in uu dhinto Kabtankii waday Doonta ay la socdeen 18 Iraaniyiin ah.
Waxaa uu falkaas ku tilmaamay mid sharci darro ah,waxaana uu Dowladda Soomaaliya ku eedeeyay in ay geysatay jdil aan sharci ahayn.
Wasaaradda arrimaha dibadda Iraan ayuu sheegay in kiiskan ay dabagal ku sameyn doonto oo Kalluumeysatada ay iyada jawaab ka sugayaan.
Ciidamada Maamulka Puntland ayaa hadda gacanta ku haya 17 Maxaabiis oo uu midi dhaawacyahay,halka Kabtankii Markabkana uu geeriyooday.
Puntland waxaa ay sheegtay in Doontaan ay saaranyihiin in kabadan 2Tan oo Kalluunka Soomaaliya ah oo sharci darro ay Kalluumeysatada Iraan uga jillaabteen Xeebaha Soomaaliya.
Dalka Iraan waxaa uu safka hore uga jiraa Waddamada ay Hay’adda Badaha Caalamiga ah ku sheegtay in si aan sharci ahayn Kalluumeysi uga sameyso Soomaaliya,kaas oo Sanadkiiba laga sameeyo $300Milyan oo doollarka Mareykanka ah.
Warar ku saabsan Ganacsiga Suuqa Bakaaraha
Wararka inaga soo gaaraya Suuqa Bakaaraha ayaa waxa ay sheegeen in saakay dib loo ...
Mareykanka oo war ka soo saaray in Askari looga dilay Soomaaliya
Taliska Mareykanka Afrika ee (AFRICOM) ayaa waxa ay beeniyeen in Askari Mareykan ah looga ...
Puntland oo sheegtay in ay dishay Dagaalyahano Shabaab ah
Ciidanka Amniga Puntland (PSF) ayaa Howlgal gaar ah 20-kii bishan waxa ay ka fuliyeen ...
Khayre oo magacaabay Madaxa isku xirka Deeqaha
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa Muxumed Xuseen Axmed u magacaabay Madaxa ...
Soomaali lagu dilay London
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya laba wiil oo Soomaali ah oo xalay ...
Galmudug oo shaacisay waqtiga ay Shabaab ka saareyso degaanadeeda
Maamulka Galmudug ayaa balan qaaday degaanadiisa qeybaha ay kaga harsan yihiin ururka Al-shabaab inuu ...
Duqaymo lagu dilay 250 qof oo Suuriya ka dhacay
Tirada dhimashada ee duqaynta Suuriya ee magaalada Ghouta ayaa la sheegayaa inay gaartay 250 ...
Wararkii ugu dambeeyay Duqeyn ka dhacday Jubbaland
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Duqeyn Diyaaradeed oo saakay aroortii abaare 05:00 ...
Shabaab oo sheegtay in ay dileen Askari Mareykan ah
Xoogaga ururka Al-shabaab ayaa waxa ay sheegeen in ay dileen Askari Mareykan ahaa, kadib ...
Maxkamada Ciidamada Qalabka sida oo xukun dil ah ku riday sarkaalkii ka danbeeyay dilkii Siciid Mariine.
Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya ayaa goordhow waxa ay xukun ku riday Sarkaalkii ...
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsidayeeyay Geeridii ku timid Allaha u ...